Ambovombe Androy Zaza tsy ampy taona no atidohan’ny fanafihana
Zaza tsy ampy taona roa tamin’ireo tompon’ny atidohan’ny fanafihana no nidoboka am-ponja vonjimaika niaraka tamin’ireo lehilahy roa hafa.
Nitrangana fanafihana nisesisesy tao an-tampon-tanàna’Ambovombe Androy ny volana septambra lasa teo iny. Nanao ny fanadihadiana ny polisy mahakasika ireo fanafihana misesy nianjady tamin’ny mponina tany an-toerana ireo. Nisy ny vaovao azo avy amin’ny olona tsara sitrapo tany an-toerana ny 15 septambra lasa teo ka fantatra avokoa ireo olon-dratsy nanao ireo fanafihana.
Nametraka paik’ady ny polisy any an-toerana ka ny 16 septambra lasa teo dia tra-tehaky ny polisy ny lehilahy miisa efatra izay mpanao an’ireo asa ratsy ireo ka tsy ampy taona ny roa amin’izy ireo. Rehefa nohadihadiana tany amin’ny kaomisaria izy ireo dia niaiky ny heloka nataony fa izy ireo no tompon’andraikitra tamin’ny fanafihana nisesy tao Ambovombe. Nidoboka am-ponja vonjimaika izy 4 mirahalahy rehefa natolotra ny fampanoavana. Tsy any Ambovombe irery ihany fa saika manerana ny Nosy no mahazo vahana ny asa ratsin’ny zaza tsy ampy taona.